Odeeffannooon hanga ammaa poolisiin du'a barattoota Yunivarsiitii Adaamaa irratti qabu maali? Kichuu
[ June 17, 2019 ] Ethiopia Plans to Privatize Key State Enterprises Business
[ June 17, 2019 ] Ethiopia:ምንድነው እዝያች አገር ውስጥ እየሄደ ያለው አንዱን ወገን እንደ አገር ጠባቂ ሌላውን ደግሟ እንደ አገር አፍራሽ የማየት ነገር ነው ያለው Amharic
[ June 17, 2019 ] Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dambi Dolloo shugguxiidhaan dhahaman News
[ June 17, 2019 ] እነዥን የነፍጠኛ ርዝራዧችን ማን ነው የኦሮሟን መሬት ባለቤት ያደረጋቸው??? Amharic
[ June 17, 2019 ] Oromiyyaa kessatti maaltu demaa jiraa?Kantiibaan Magaalaa Naqamtee “WBO dhaan Shiftaa!” News
[ June 17, 2019 ] Mohamed Morsi death: Ousted Egyptian President dies during court appearance Africa
[ June 17, 2019 ] Saliha Sami :Rakkanneef Rakkoof walin dhiifnu, walqabannee Tabba baana News
[ June 17, 2019 ] The toxicity of the Ethiopian people towards a leader has gone much beyond the limit. News
[ June 17, 2019 ] OBS- buttaa qaluu finfinnee qe’ee warra gullalleetti!! TV
[ June 17, 2019 ] Oduu Gadda: “Abbaan muummicha ministeeraa Dr Abiyyi Ahimad Abbaan Isaanii Addunyaa kanarraa du’aan boqataniiru.” News
HomeAfaan OromooNewsOdeeffannooon hanga ammaa poolisiin du’a barattoota Yunivarsiitii Adaamaa irratti qabu maali?
Odeeffannooon hanga ammaa poolisiin du’a barattoota Yunivarsiitii Adaamaa irratti qabu maali?
Sababa du’a barattoota Yunivarsiitii Saayinsiifi Teekinooloojii Adaamaa baruuf poolisiin qorannoo taasisaa akka jiru beeksise.
(bbc)—”Sababa du’aniif reeffi barattoota sadanuu gara hospitaala Phaawuloositti ergameera,” jechuun Hogganaan Qajeelcha Poolisii magaalaa Adaamaa Komaandar Darajjee Mul’ataa BBC’tti himaniiru.
Barattoonni sadii guyyaa afur dura dormiidhaa bahuu isaanii odeeffannoon qaba kan jedhu poolisiin, boodarra kuusaa bishaanii yunivarsiitichi haaoromsee itti fayyadamu keessaa gaafa jalqabaa odeeffannoo poolisii bira dhaqqabeen reeffi barataa tokko argame.
Yunvarsiitii Asoosaatti lubbuun barattoota sadii darbe
‘Namni nagaa hin jaalanne kan Gadaatti hin bulleedha’
Hokkora Asoosaatiin walqabatee angawoonni 4 hojiirraa ka’an
Guyyaa lammataas haaluma wal fakkaatuun bishaanichuma keessaa reeffi barattoota lamaa argame jechuun himu.
Odeeffannoo hanga ammaa poolisiin qabuun ”barattoonni waliin bahuu isaaniifi magaalaa turuu isaaniiti. Magaalaa keessa eessa turan kan jedhu qulqullaa’aa jira,” Jedhaniiru.
”Mallattoon adda ta’e isaan irratti argame hinjiru. Lama uffata isaanii waliin jiru, tokko sirumaa qullaadha. Barattoonni sadanuu barattoota waggaa 4ffaati. Hiriyoota, adda hin bahani.”
Akka poolisiin jedhutti barattoonni kuni Asallaa, Finfinneefi Baahirdaariiti dhufan.
Barattoonni ajjeefamaniiru jedhanii namoonni miidiyaa hawaasummaa irratti barreessanis wanti mirkanaa’ee hin jiru, qorannoorra jira jedhaniiru. ”Qorannoo keenya waliin, isa hospitaalaa dhufu waliin ifa taha,” jechuun himan.
Lafi bishaanii suni balaan biraallee akka hin mudane ”dallaadhaan akka marfamu hoggantoota yunivarsiitii waliin dubbanneerra,” kan jedhan Komaandar Darajjeen, badiin biraa akka hin dhalanneef bakka bishaanii sana Poolisiinis eegaa jiraachuu himaniiru.
Miidiyaa hawaasumma garaagaraa irrati wanta barreeffamu dhugaadha jedhani fudhachuurra, akka poolisiitti wanta mudate adda baafnee ummataaf ifa waan goonuuf obsaan nu eegaa jechuun dhaamaniiru.
Oduu Gaddaa:Barattoonni university Science fi technology Adaamaa waggaa 4ffaa baratan ajjeeffamanii reeffi isaanii boolla kosii keessatti argame. – https://t.co/Ss1xBmLFV8 pic.twitter.com/8GAFdzh9IZ
ICC should drop charges against Sudan’s Bashir if … – Mo Ibrahim
Leegaasiin uummata oromoo hundi kan jeneraal Taaddee Birruu ta’uu qaba kan jenuu maalifi.
Ethiopia:ምንድነው እዝያች አገር ውስጥ እየሄደ ያለው አንዱን ወገን እንደ አገር ጠባቂ ሌላውን ደግሟ እንደ አገር አፍራሽ የማየት ነገር ነው ያለው
እነዥን የነፍጠኛ ርዝራዧችን ማን ነው የኦሮሟን መሬት ባለቤት ያደረጋቸው???
Oromiyyaa kessatti maaltu demaa jiraa?Kantiibaan Magaalaa Naqamtee “WBO dhaan Shiftaa!”
Saliha Sami :Rakkanneef Rakkoof walin dhiifnu, walqabannee Tabba baana
The toxicity of the Ethiopian people towards a leader has gone much beyond the limit.
OBS- buttaa qaluu finfinnee qe’ee warra gullalleetti!!
Oduu Gadda: “Abbaan muummicha ministeeraa Dr Abiyyi Ahimad Abbaan Isaanii Addunyaa kanarraa du’aan boqataniiru.”
Archives by Month Select Month June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 November 2013
Caalaa Daggafaa “IRRAAN GEENYE” New Oromo Music 2019